Movistar inogadzirira eSIM inoenderana yeApple Watch | Ndinobva mac
Movistar inogadzirira inoenderana eSIM yeApple Watch
Vodafone neOrange, ayo ari makwikwi akananga eMovistar, ave kubva pakutanga eSIM kuwanikwa kwemawachi ane LTE kuunganidza uye yeiyo nyowani iPhone XR uye XS. Mune ino kesi zvinoita sekunge anoshanda Kubudikidza neforamu yako urikusimbisa kusvika kweshumiro iyi yevatengi vavo uye yaive nguva ...
Uye ndezvekuti zvaiita senge zvisinganzwisisike kwatiri kuti uyu opareta haana kuwedzera iyi sarudzo kuzvirongwa zvayo kubva pakutanga. Chero zvazvingaitika, mumwe weVamiriri veMunharaunda aripo mumaforamu evashandisi yakasimbisa kusvika kweshumiro iyi kupera kwemwedzi uno waMarch, isina zuva chairo asi rinofungidzirwa.
Kupera kwaKurume kutanga kwaApril
Saka isu tinotarisira kuti mushure meizvi inova nhau dzepamutemo uye kuti vatengi vakamirira kuenderana kweSIM neApple Watch yavo kuti ive yechokwadi. At Movistar foramu zvirinani ivo vanodaro uye nekudaro hatina kukahadzika kuti ivo vanozoiteerera kunyangwe hapana chirevo chepamutemo sekudaro kuchisimbisaZvirokwazvo, sekufamba kwemazuva, zvinosimbiswa zviri pamutemo.
Saka vese vatengi vevashandisi vanozokwanisa kunakidzwa nebasa iri rinopihwa kubva pazuva rimwe chete rekutanga kweApple Watch Series 4 neLTE mune mamwe makuru maviri, Orange neVodafone. Kune rimwe divi, isu tinotarisira kuti iyo odyssey yekushandisa iyo yekutanga vashandisi veeSIMs vakapfuura nayo hazviitike neMovistar, isu tichaona zvinopedzisira zvaitika uye pavanotanga zviri pamutemo iyi sevhisi.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » Apple zvigadzirwa » Apple Watch » Movistar inogadzirira inoenderana eSIM yeApple Watch
Akanaka Jordi, ndasuwa esim, ini ndaita basa uye mamiriro eMovistar kubva Zvita 2018, chii chiri kubuda ipapo pakupera kwemwedzi uno?
Mhoro Adrián, iyi ndiyo eSIM inoenderana neApple Watch isingawanikwe muMovistar
Chidzidzo cheIDC chinoshongedza korona yeApple seye yakatengesa zvakanyanya smartwatch yeyakare 2018
Iwe unofanirwa here kushandisa CD neMac yako? Iye zvino unogona kuwana iyi yakadzikira disc player paAmazon